PHOTOSHOP မှာစာသားကို SELECT လုပ်လုပ်နည်း - PHOTOSHOP ကို - 2019
Photoshop မှာဓါတ်ပုံတံဆိပ်များကို Select လုပ်ပါ
လိုအပ်မှုကိုစိတ်ထဲဗီဒီယိုဖိုင်များတစ်ရိုးရှင်းပြီးအဆင်ပြေကစားသမားများအတွက်ပေါ်ပေါက်သည့်အခါချက်ချင်း DivX Player ကိုလာပါတယ်။ ဒါကြောင့်ကိုယ့်ဖိုင်တွေ browsing မှချုပ်ထားမဟုတ်ကြောင့်ဒီနေ့, ဒီအစီအစဉ်ကိုပိုပြီးအခွင့်အလမ်းကိုကြည့်။
Diviks ကစားသမားပါ - သင်ကဗီဒီယိုဖိုင် Format အမျိုးမျိုးကစားပေးနိုင်ပါတယ်တဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့မီဒီယာပလေယာ။ ဟုတ်ပါတယ်, ဒီထုတ်ကုန်၏အဓိကအာရုံစူးစိုက် - က DivX format နဲ့င်ကြောင့် ယင်း၏ဖွဲ့စည်းမှုအတွက်ဗီဒီယိုမှန်ကန်သောမျိုးပွားပုံစံတစ်ခုဖြစ်သည်ကိုသေချာလိမ့်မည်ဟုအရှိဆုံးသင့်လျော်သောကုဒ်ပြောင်းကိရိယာများဖြစ်ကြသည်။
အများဆုံးကို formats များအတွက်ပံ့ပိုးမှု
အဓိကအထူးပြုများ၏အစီအစဉ်မှာ - DivX format နဲ့, ဒါပေမယ့်ဒီမီဒီယာပလေယာသုံးပြီးထိုကဲ့သို့သော, AVI, MOV, MP4, စသည်တို့ကိုကဲ့သို့သောအခြားဗီဒီယိုအမျိုးအစားမကစားနိုငျကွောငျးမဆိုလိုပါ
တစ်ဦးစာရင်းထဲတွင် Player ကိုကမကြာသေးခင်ကကစားထားပြီးသမျှသောဖိုင်များကိုဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်နောက်ဆုံးနှစ်ဆယ်ဖိုင်များကိုဖွင့်မြင်နိုင်ပါသည်။
ထိုကဲ့သို့သောအရွယ်အစား, format အတွက်ဘစ်နှုန်း, အသံသတင်းအချက်အလက်နှင့်ထို့ထက် ပို. အဖြစ်ဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်ကြည့်ပါ။
ဒါဟာကစားသမား 90 သို့မဟုတ် 180 ဒီဂရီအားဖြင့်လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ထဲမှာမသာ, ဗီဒီယိုလှည့်, ဒါပေမယ့်ပင်အလျားလိုက်သို့မဟုတ်ဒေါင်လိုက်ထင်ဟပ်နိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါမီဒီယာပလေယာအတွက်ကြိုတင် options များထဲကတစ်ခုကိုရွေးပါ, သို့မဟုတ်လွတ်လပ်စွာသင့်ကိုယ်ပိုင်သတ်မှတ်ကြလိမ့်မည်နှစ်ဦးစလုံးသောအချိုး, ကဲ့သို့သောညှိနှိုင်းမှုများအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။
အသံစိတ်ကြိုက် built-in tools တွေသုံးပြီး, သင့်အကြိုက်ဖို့ဗီဒီယိုထဲမှာအသံညှိ။
Diviks Player ကိုနီးပါးတိုင်းအရေးယူယင်း၏ hotkey ပေးပါသည်။ ကံမကောင်းစွာပဲသူတို့ရဲ့ပေါင်းစပ်ကစားသမားမဖြစ်နိုင်ပါသတ်မှတ်။
ဥပမာအား link တစ်ခု, YouTube ဗီဒီယိုတစ်ခုကိုထည့်သွင်းခြင်း, သင်ကစားသမား window တွင်တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုရန်နိုငျပါလိမျ့မညျ။
သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် DVD-ROM ကို, ကို USB-မီဒီယာသို့မဟုတ်ဖိုင်တွဲအပေါ်စံချိန်အကောင်အထည်ဖော်ဗီဒီယိုတစ်ဦးမိတ္တူကိုဖန်တီးပါ။
high-quality ကွန်တိန်နာကွဲပြားခြားနားသောနောက်ခံစကားပြောသံများနဲ့ရုပ်ရှင်နှင့်အတူအများအပြားကဗီဒီယိုပုဒ်ရှိပါတယ်။ DivX Player ကိုဖွင့်သင်အလွယ်တကူအသံပုဒ်အကြားပြောင်းလဲနိုင်သည်။
အဆိုပါ DivX Player ကို (မျိုးစုံကိုပုဒ်လျှင်) စာတန်းထိုးအကြားအကူးအပြောင်းများနှင့်ရရှိနိုင်လျှင်တစ်ခုတည်းဖိုင်အဖြစ်သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်တစ်ဦးရုပ်ရှင်စာတန်းထိုးကို download လုပ်ပါဖို့ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်မီဒီယာပလေယာ setting များကိုသူတို့ကိုယ်သူတို့စာတန်းထိုး, အမည်ရအရောင်နဲ့အရွယ်အစားညှိနေသည်။
Creating screenshots များ
အများဆုံးထိုကဲ့သို့သောဖြေရှင်းချက်၌ရှိသကဲ့သို့, DivX Player ကိုအသုံးပြုသူတစ်ဦးစခရင်ပုံ, ဆိုလိုသည်မှာဖန်တီးရန်အခွင့်အလမ်းရှိပါတယ် ကွန်ပျူတာပေါ်မှာရုပ်ရှင်၏လက်ရှိ frame ကို save လုပ်ပါ။ ဒါပေမယ့်မှမတူဘဲဥပမာ, လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်သည့် Media Player ကိုဂန္ထဝင်, ဤအင်္ဂါရပ်သာ Pro ကို-ဗားရှင်းဝယ်ယူပြီးနောက် Diviks ပလေယာအတွက်ရရှိနိုင်သည်။
ဗီဒီယိုထဲမှာရုပ်ပုံအမြဲကျနော်တို့ကဖြစ်ချင်သောအရာကိုမဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ DivX Player ကိုအစီအစဉ်ကိုဤကဲ့သို့သောရောင်ခြည်, contrast နဲ့ရွှဲအဖြစ် parameters တွေကိုချိန်ညှိခြင်းဖြင့်အရောင်ဆုံးမခြင်းလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
အခြား devices မှဘာသာပြန်စာပေ
နှင့်အတူ, ဥပမာအားဖြင့်, DivX Player ကိုအတူ Laptop နဲ့အတူတူကွန်ယက်ချိတ်ဆက်တဲ့ TV, သင် laptop ကိုထိန်းချုပ်မှုကနေတဆင့်သင့်ရဲ့ TV ပေါ်မှာဗွီဒီယိုကို run ဖို့စွမ်းရည်ပေးထားပါတယ်။
1. နေရာလေးကိုနှင့်အဆင်ပြေ interface ကို;
3. အစုံစားသတ္တဝါများ, ဒါပေမယ့်သာကဗီဒီယိုအသံသွင်းဖို့စပ်လျဉ်း;
1. ကစားသမားတစ်ဦးကိုဗီဒီယိုမဖြစ်သည့်အခါ, (အခမဲ့ဗားရှင်း) ကြော်ငြာအတွက်အဓိက window တွင်ပြသနေသည်။
DivX Player ကို - အိမ်မှာအသုံးပြုမှုအဘို့ကြီးစွာသောမီဒီယာပလေယာ။ ဒါဟာအင်တာဖေ့စဝန်မည်မဟုတ်နှင့် operating system ကိုအပေါ်ဝန်တိုးမြှင့်ခြင်းမရှိပါကြောင်းဘယ်သူမျှမပို features တွေရှိပါတယ်။
DivX Player ကိုအခမဲ့ Download
GOM Media Player ကို VOB Player ကို Windows Media Player crystal Player ကို
DivX Player ကို - DivX မီဒီယာစီစဉ်ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံများအတွက်ထောက်ခံမှုနှင့်အတူဒစ်ဂျစ်တယ်အရည်အသွေးမြင့်ဗီဒီယိုပြန်ဖွင့်ဘို့ဒီဇိုင်းထုတ်တဲ့အထူးပြုမီဒီယာပလေယာဖြစ်ပါတယ်။
ရေးသားသူ: DivX, Inc
Size: 83 MB အထိ